शवहरुको कलात्मक प्रदर्शनी, अधिक कमाइ गर्ने गतिलाे माध्यम « Nagarik Khabar
शवहरुको कलात्मक प्रदर्शनी, अधिक कमाइ गर्ने गतिलाे माध्यम
प्रकाशित मिति : 26 November, 2020 8:02 am
एजेन्सी । मृत्यु दुः खद तर सत्य हो । मान्छे मरेपछि शवलाई आ–आफ्नो परम्परा अनुसार सतगत गरिन्छ । सामान्यतया शव भन्नासाथ मानिसहरु केही असहज महसुस गर्छन भने डराउँछन पनि । यो स्वभाविकै पनि हो । तर संसारमा यस्ता मान्छे पनि छन । जो शव अर्थात लाससंग रमाउँछ । आफु मात्रै रमाउने हैन, अरुलाई पनि रमाउन सिकाउँछ । अनि त्यसबाट धन आर्जन पनि गर्छ ।
शवलाई सतगत गर्नुको सट्टा विभिन्न हाउभाउमा सजाएर सार्वजनिक प्रदर्शनको विषय बनाउने कुरा तपाँई, हामी जो कोहीलाई पनि पत्याउन गाह्रो हुन सक्छ । तर यो सत्य हो । डाक्टर गुन्थर भोन हेगेन्सको लण्डनमा रहेको संग्रहालयले यो तत्य सावित गरेको छ । उनको बडिवर्ल्ड म्युजियम यही विषयका लागि विश्व प्रसिद्ध बनेको छ ।
लाशलाई कलात्मक रुपमा सजाएर प्रर्दशनीको साधन बनाउने दुर्लभ सोंच पहिलो पटक कार्यान्वयन गरेका डा.हेगेन्स सन १९४५ मा पोल्यान्डमा जन्मिएका हुन । उनी अहिले ७१ वर्षका भए । हरेक अस्पतालको लाश राख्ने घर अर्थात मर्चरीमा राखिएका लाशहरुलाई प्रदर्शनीमा राखेर अहिलेसम्मकै नयाँ कामको थालनी गरेका हुन ।
यो विषय विवादको घेरामा पनि तानियो । यद्यपी कुनै पनि विषय निर्विवाद हुन सक्दैन । तर डा. हेगेन्सले ती सबै विवाद र तर्क वितर्कहरुलाई पन्छाउँदै आफ्नो नविनतम सोंचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निरन्तर लागि परे । जुन प्रयास अहिले विश्वभर प्रख्यात बनेको छ । अहिले उनलाई धेरैले डाक्टर डेथ भनेर पनि सम्बोधन गर्ने गर्छन ।
डा.डेथ अर्थात हेगेन्सका यो सफल प्रयासले मानिसहरुको लाशलाई हेर्ने सोंचमा आमुल परिवर्तन ल्याइदिएको छ । लण्डनमा रहेको उनका म्युजियममा मानिसको लाश मात्रै नभएर विभिन्न जनावरहरुको मृत शरीरलाई पनि कलात्मक रुपमा सजाएर प्रदर्शनीमा राखेका छन् । लण्डनमा रहेको यो म्युजियम सन २०१८ मा खुलेको हो । विश्वभर उनका ९ वटा संग्राहलयहरु पनि छन । विश्वका ४ करोड भन्दा बढी मान्छेहरुले उनको यो कलालाई नजिकबाट नियालेका छन ।
हाल डाक्टर हेगेन्स जर्मनी र पोल्यान्डको सिमास्थित गुविन भन्ने स्थानमा बस्छन । त्यहाँ पनि उनको यो सोंच झनै विकासित रुपमा प्रस्फुटन हुँदैछ । डा.हगेन्सले त्यहाँ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एनाटोमी संग्राहलय खोल्ने तैयारीमा निकै धेरै पैसा लगानी गरेका छन् । अहिले ७१ वर्षको उमेरमा आइपुग्दा यीनलाई पार्किन्सन रोग लागेको छ । उपचारका क्रममा यीनको मष्तिष्क प्रत्यारोपण पनि गरिएको छ । अब लागौं डाक्टर गुन्थर भोन हेगेन्सको शव सजाउने र जोगाउने प्रकृया तर्फ ।
बेलाबेलामा मर्मत संभार र सरसफाई गरिएमा यी लाशका कलाहरु एक हजार वर्षसम्म टिक्ने डा.हेगेन्सको दाबी छ । एउटा लाशलाई सजाउन र जोगाउन ७० हजार देखि १ लाख पाउण्डसम्म खर्च लाग्ने उनले बताए । हिजआज लाशहरुलाई नकुहिने गरी सुरक्ष्ति बनाउने काम पनि निकै महंगो हुँदै गएको छ । त्यसैले उनले केही मेडिकल कलेजहरुलाई पनि अध्ययन प्रयोजनका लागी लाशहरु पठाउने गरेका छन् । यसरी पठाँउदा एउटा मान्छेको टाउको या फोक्सो जस्ता अङ्गहरुबाट ५ हजार देखि ७ हजार यूरोसम्म लिंदै आएका छन् ।
डा.हेगेन्सले म्युजियममा सजाएर राख्ने लाशहरु किन्ने मात्र हैन, दानको रुपमा पाउने गरेका छन । जसअनुसार अहिलेसम्म १५ हजार जिवित मानिसहरुले आफ्नो मृत्युपर्यन्त शरीर दान गर्न सम्झौता गरिसकेका छन् । उनको सग्राँहलयमा राखिएका र आउने लाशहरु मृतकको इच्छा अनुसार ल्याइन्छ ।
त्यस्ता लाशहरुलाई प्लास्टीनेशन भनिने रसायनिक प्रक्रियाद्वारा सुरक्षित बनाउँछन । डा.हेगेन्स आर्थिक हिसाबले मजबुत ब्यक्ति हुन । उनको सम्पत्ति बारे प्रश्न गरिंदा उनले आफ्ना छोराछोरीहरुलाई उचित शिक्षा दिएको बताउँदै आफुसंग रहेको सबै सम्पत्ती संसारमै सबैभन्दा ठूलो एनाटोमी अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न खर्च गर्ने बताए । उनका अनुसार यसबाट मानव जीवन, विकास र अन्य विविध खाले अध्ययन अनुशन्धान सघाउ पुर्याउँछ ।
डा. हेगेन्सको शव संग्रहालयले समय समयमा मृत्युपर्यन्त शरीर दान गर्न चाहनेहरुका लागि आवेदन आह्वान गर्छ । अचम्मको कुरा के छ भने, संसारभरिका धेरै मान्छेहरु अत्यन्तै उत्साहका साथ आवेदन दिन्छन । आवश्यकता भन्दा धेरै मानिसहरुको आवेदन आउँछ । स्रोतः द गार्जियन ।
डाक्टर गुन्थर भोन हेगेन्स
शवहरुको कलात्मक प्रदर्शनी
प्रधानमन्त्री ओलीकाे ओरालो लागेको बैँस फर्किन्न : भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम मंगलबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा आजको सुनुवाइ सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर आज पनि बहस सुरु भएको छ ।
चितवन । भरतपुर अस्पतालमा आँखा रोगको उपचार सेवा आजबाट सुरु गरिएको छ । अस्पतालमा आँखा
हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बागमती प्रदेश सरकारले शिर ठाडो हुनेगरी काम गरिरहेको
गब्बामा भारतको ऐतिहासिक जितसँगै बोर्डर–गवास्कर सिरिजमा भारतद्वारा ह्याट्रिक
ब्रिसबेन । टेष्ट च्याम्पियनसीप अन्तर्गत भारतविरुद्धको चौथो तथा निर्णायक टेष्टमा भारत ३ विकेटले विजयी भएको